२४ लाखमा कि`न्न पाइन्छ दुई माइक्रो एस यूभी, यस्ता छन् विशेषता – Eshankharapur
रगतको खराबीलाई मेटाउन यसरी दैनिक प्रयोग गर्नुहोस् प्याज, पाउनुहुनेछ यस समस्याबाट छुटकारा
श्रीमानले २ छोराछोरी छो*डेपछि श्रीमतिको भयो सडकमा बास , सौताले समेत कु*टेर लखे*टिन (हेर्नुहोस भिडियो)
तपाईँ बेरोजगार हुनु हुन्छ भने अब सजिलै यसरी झिक्न सक्नु हुनेछ बैंकबाट ऋण
भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दु:खद् खबर, ठुलो क्ष’ति, बाढी पहिरो वि’तण्डा नसोचेको भयो, ३ दिन भारी वर्षा
निरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको मूल्य, आज पनि फेरी ह्वातै घट्यो मुल्य, तोलामा कति ?
असोज १३ गतेसम्मका लागि सबै बन्द गर्ने निर्णय
२० लाख ९६ हजारमै हुन्डाई सेन्ट्रो
सबै सेवा र व्यवसाय एक महिना नखोल्ने गरी,देशभर फेरि एक महिना लकडाउन ?
अब फेरि लकडाउन ? यस्तो छ सरकारको तयारी
मुख्य पृष्ठ /Auto News/२४ लाखमा कि`न्न पाइन्छ दुई माइक्रो एस यूभी, यस्ता छन् विशेषता
२४ लाखमा कि`न्न पाइन्छ दुई माइक्रो एस यूभी, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । कोभिड १९ को संक्रम`ण छि बजा`रमा सस्तो मू`ल्यमा कार किन्न खो`ज्नेहरु धेरै रहेका छन् । अहिले बजारमा १८ लाख मू`ल्य देखिका कार किन्न पाइने भएपनि उत्कृष्ट गाडीको खोजीमा ग्राहक`हरु सधै विकल्प खोजी रहेका हुन्छन् । यस्तोमा करिब २४ लाख रुपैयाँमा रेनो र मारुती सुजुकीको माइक्रो एसयूभी थिममा उत्पादन भएका क्वीड र एस-प्रेशोका टप भेरियन्ट ग्राहकले खरिद गर्न सक्ने छन् ।
यस्तोमा भारतीय बजारमा रेनो क्वीडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मारुती सुजु`कीले ल्याएको एस-प्रेशो स्वभाविक चर्चामा थियो । अहिले यी दुबै गाडी नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेका छन् । रेनो क्वीडको फेसलिफ्ट नेपाल आएको छ भने एस-प्रेशो विगत एक वर्षदेखि नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
यी दुबै कार माइक्रो एसयूभीको थिममा निर्माण भएका हुन् । समान अव`धारणामा निर्माण भएका यी दुई ह्याचब्याक मोडलको मूल्य, पावर, बनावट, डायमेन्सन जस्ता विषयमा समानता पाउन सकिन्छ ।
डायमेन्सन : एस-प्रेशोको लम्बाई ३५६५ एमएम, चौडाई १५२० एमएम र उचाई १५६४ एमएम रहेको छ । यसको ह्वीलवेस २३८० एमएम रहेको छ । २७ लिटर इन्धन क्षमताको फ्युल ट्यांकी लगाइएको छ । क्वीडको लम्बाई ३६७९ एमएम, चौडाई १५७९ एम`एम, उचाई १४७८ एमएम रहेको छ । यसमा २४२२ एमएमको ह्वीलवेश दिइएको छ भने २८ लिटर क्षमताको फ्युल ट्यांकी लगाइएको छ । दुबै कारमा समान १८० एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिइएको छ ।
इन्जिन : सुजुकीको हार्टटेक प्ल्याट`फर्ममा निर्माण गरिएको एस-प्रे`शोमा १.० लिटर ३ सिलिन्डर के सिरिज पेट्रोल इन्जिन दिइएको छ । जसले ६८ बीएच पावर र ९० एनएम टर्क उत्पादन गर्छ ।रेनो क्वीडमा उपलब्ध थ्रि सिलिन्डर १.० लिटर इन्जिनले ६८ हर्ष पावर र ९१ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । दुबै कारको इन्जिनमा पाँच स्पीड म्यानुयल र एएमटी गियरबक्स लगाइएको छ ।
विशेषता : एस-प्रेशोमा एयर कन्डिसन सँगै पावर स्टेयरिंग, फ्रन्ट पावर विन्डो, किलेस इन्ट्री, सेन्ट्रल लकिंग सिस्टम, बडी कलर बम्पर जस्ता विशेषता दिइएको छ । एस-प्रेशोमा १७.७८ सेन्टिमिटरको स्मार्ट प्ले स्टुडियो टचस्क्रिन इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम, स्टेयरिंग माउन्टेड कन्ट्रोल्स, बडी कलर ओरभीएमएस लगायतका विशेषता दिइएको छ । दुबै कारमा एबीएस, इबीडी, एयरब्याग, रिभर्स पार्किङ सेन्सर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सिट बेल्ट रिमाइन्डर जस्ता विशेषता प्रदान गरिएको छ । क्वीडमा आकर्षक इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, स्पीडोमिटर, ओडोमिटर लगायतका विशेषता दिइएको छ ।
माइलेज : एस-प्रेशोले प्रति`लिटर २३.९५ किलोमिटर माइलेज प्रदान गर्छ भने, क्वीडले प्रतिलिटर २३.०४ किलोमिटर माइलेज दिन्छ ।
मूल्य : नेपाली बजारमा एस-प्रेशोको तीन भेरियन्ट बिक्री हुँदै आएको छ । स्टायडर्ड भेरियन्टको मूल्य २३ लाख ४९ हजार, एलएक्सआई भेरियन्टको २४ लाख ४९ हजार र भिएक्सआई भेरियन्टको मूल्य २५ लाख ४९ हजार `रुपैयाँ रहेको छ । रेनो क्वीडको रेगुलर मोडल ४ भेरियन्टमा बिक्री हुँदै आएको भएपनि नयाँ फेसलि`फ्ट मोडल आरए`क्सटीओ मात्रै ल्याएको कम्प`नीले जनाउको छ । यसको मूल्य २४ लाख ५० हजार हाराहारी पर्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले यसको आधिकारीक मूल्य भने सार्वजनि`क गरेको छैन ।
नेपालमै सुरू भयो एक अर्ब लगानीमा मोटरसाइकल , स्कुटरको उत्पादन
व्याज नलाग्ने स्कीममा बजाजको कुन मोटरसाइकल किन्दा कति पर्छ मासिक किस्ता (सूचीसहित)
मोटरसाइकल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुस यति सस्तोमा पाइन्छ